Taunggyi - The Cherry Land: 2008 ခုနှစ် - တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲ web casting
2008 ခုနှစ် - တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲ web casting
2008 ခုနှစ် - တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲကို Studio 35 နှင့် တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ ဘလော့ တို့ ပူးပေါင်း၍ web casting ဖြင့် တိုက်ရိုက်ပြသပေးပါမည်။
browser: Mozilla 3.0
Plugin: Windows Media 11 plugin for Mozilla
Media: Windows Media Player 11 (0r) WVC1 codec
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည် နေ့ရက် အချိန်
နေ့ရက် - နိုဝင်ဘာ ၅ မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ
အချိန် - ည ၆ နာရီမှ စတင်ပါမည် ( မြန်မာစံတော်ချိန်)
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 5:39:00 PM
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် နီးလာလေ...ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာလေပါပဲ...အရင်နှစ်တွေကအတိုင်း online ပေါ်ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်...ဒီနှစ်လည်း တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီ အဖွဲ့သားများလည်း ခြေချုပ်မိပြန်ပြီပေါ့....:D ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အဝေးကနေ ကျေးဇူးတင်မိနေတာပါ...မနှစ်ကလိုပဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း...
Wednesday, October 22, 2008 7:36:00 PM
မိုးချုပ်အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ မျှော်နေမဲ့ မိသားစုလဲမရှိဘူး... လေမငြိမ်ရင် ပြေးစရာ ကြိုရှာထားဖို့လဲမလိုဘူး... အင်း... အအေးဒဏ် ခံနိုင်အောင် တစ်ခုခုလေး ဆောင်ထားရအောင်ကလဲ.. မအေးတာက ခက်တယ်.. ကျေးဇူးတင်တယ်... ပွဲခင်းထဲရောက်သလိုပဲ ခံစားနေရအုံးမယ်... အလွမ်းပြေဆိုတာ ထက်... လွမ်းလို့ရယ် မပြေနိုင်အောင် ဖြစ်အုံးမယ်.. ဒီတန်ဆောင်တိုင်ကတော့.... ဘာပဲ ပြောပြော ဒို့ကတော့ ဓါတ်ခဲမီးပဲဟေ့....
Wednesday, October 22, 2008 9:51:00 PM
အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်) said...
Thursday, October 23, 2008 10:15:00 AM
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ကို လူကိုယ်တိုင်မပြန်ရပေမဲ့ ကြည့်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အတွက် စိတ်တော့ဖြေသာသွားတာပေါ့ ဒီတောင်ကြီးချယ်ရီမြေက အဖွဲ့သားများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
lynne nyunt sein said...
A million thanks and appreciation from the bottom of my heart to Taunggyi Cherry members.
I have been away from home for ages, and Tazaungdaing Festival spirit is always in my heart.
Sunday, November 02, 2008 3:07:00 AM
I love TaUngGy!
Wednesday, November 05, 2008 7:18:00 PM
I cant open this live show.
I want to see this live show.
How can I open and see .........
တန်ဆောင်တိုင်ဆိုရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် တောင်ကြီးကို မရောက်ရောက်အောင် အမြဲပြန် ပြီးမော့မော့နေကျ။ (မီးပုံးပျံ) ဒီနှစ်တော့ပထမဆုံးအကြိမ်လွတ်သွားပြီထင်နေတာ။ ဒီကနေကြည့်လို့ရလို့ တော်ပါသေးရဲ့။ ကျေးဇူးစကြ်ာဝဠာပါ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ.အဖွဲ့ရေ...
Wednesday, November 05, 2008 7:55:00 PM
အခုလို live လွင့်ပေးလို့တောင်ကြီးချယ်ရီလမ်းအဖွဲ့ သားများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်မိပါတယ်.... အရင်နှစ်ကထက် စည်ကားတဲ့ online တန်ဆောင်တိုင်ပွဲလေး အောင်အောင်မြင်မြင်ထုတ်လွှင့် ပြသနိုင်ပါစေဗျာ....းD
Thursday, November 06, 2008 6:46:00 AM
Thank you for sharing web to see hot-air balloon competition. Although I'm away from mother land, I miss Taunggyi Ta Saung Taing Pwe Taw and dream in my mind, but now I haveachance to watch it from internet. So many hanks to Taunggyi cherry members and all.
Thursday, November 06, 2008 10:30:00 PM
I can't open live show.
I'm getting serious.
I can only see chattings and the media shows nothing. Only connecting media and ready are seen.
Friday, November 07, 2008 10:36:00 AM
hazaline တိုက်ရိုက် က ညနေ့ ၆ နာရီမှ စမှာဖြစ်ပါတယ်
လိုအပ်တဲ့ software တွေသွင်းထားဖို့လိုပါတယ် window media 11 , Mozilla 3.0 , plug in for Mozilla အဲဒါတွေ သွင်းထားလို့လိုပါ လိမ့်မယ် အဲဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပါပီ....
အခု ဒီပိုစ်မှာ အကုန် ပေးထားပါတယ် download link တွေကို အဆင်ပြေပါစေ ဗျာ...
Friday, November 07, 2008 11:03:00 AM
Cannot watch this show. I don't know how to do more. I've done everything what it said.
Friday, November 07, 2008 9:32:00 PM
i miss taunggyi.i wanna c this show and wanna go to taunggyi.:(
Monday, November 10, 2008 9:26:00 AM
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ကို ကျွန်မ ရောက်ဖူးချင်တယ်..ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကူးတွေ အခုထိ အကောင်အထည်မဖော်ရသေးဘူး
သူငယ်ချင်းတွေပြောနေတာအရမ်းကိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ ...တစ်နေ့နေ့တော့ ရောက်အောင်ကိုသွားအုံးမယ်...အရမ်းအေးတယ်ဆိုလို့ သွားချင်တာလဲပါတယ်...ကျွန်မက အေးအေးလေးနေရတဲ့အရသာအရမ်းသဘောကျတယ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီဘလော့လေးကိုရေးတဲ့သူ ကို....မရောက်ဘူးပေမဲ့အားလုံးကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင်ရေးသားပြသထားတဲ့အတွက်...........
I already installed all the required software. Bur I still can't watch the live show. Can you tell me how to solve this problem?
Tuesday, November 11, 2008 12:37:00 AM
I miss Taunggyi alot. Even i was very far that place, every year i miss this festival. I really want to say thank you for givingachance to see direct to ur web page.
Tuesday, November 11, 2008 4:27:00 PM
I"ve been trying this since i knew ..
but i couldn't open it ..but at last
, i can open it on the last day ..
& thzzzzzzz very much to all who helped me to open it.... & who make this website
Thursday, November 13, 2008 2:41:00 AM
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က မပြန်ရတော့ မသိဘူးပေါ့ ..ဒီနှစ်တော့ မီးပုံးပျံတွေ
ကြည့် ရတာ ဟိုး .....အရင့် အရင် နှစ်တွေတုန်းကလောက်
အားမရဘူးဗျာ ကွင်းအနေအထား ကြောင့်လား ၊ (ရာသီဥတု) လေကြောင့်လား၊
ကျွန်တော် တို့လို မီးပုံးပျံ သမားတွေ ကဘဲ အသုံးမကျတော့တာလား
ကိုယ့်မီးကိုယ် အား မရသလို သူများ မီးတွေလဲ အားမရဘူးဗျာ
ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထား တာကတော့ ဖွင့်ပွဲ၊ပိတ်ပွဲတွေ အကတွေ
ဘာတွေနဲ့ လန်ပျံ နေရော........ မီးပုံးပျံ တွေ လာလွှတ်မှ အောက်မှာတင်
၀ုန်းရတာနဲ့ လေထိုးခွဲ လို့ အပေါ် ရောက်မှ ပွင့်ကျတဲ့ မီးနဲ့ လေမငြိမ်လို့ ဘာလို့ညာလို့
ကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ် ပေါ့ဗျာ ။
ဒီ တနှစ်တော့ ပြီးခဲ့ ပြီ........... နောက် နှစ်တွေ နောက် နှစ်တွေ
ဘယ်လို ကောင်းအောင်လုပ်ကြမလဲ ............
Thursday, November 13, 2008 5:12:00 PM
Thank you very much to studio 35 and taunggyicherryland.
I'veagreat time while watching the festival.
Just like i'm in taunggyi.I miss taunggyi so much.
Thanks to all. You've worked so hard.
Friday, November 14, 2008 1:08:00 PM
thanks KSMA . he give me this address. i love tgy , i miss tgy thansaungthai so much.. ...
thanks studio 35 n tgycherryland.
Saturday, June 20, 2009 1:47:00 PM
မနှစ်ကတော့ ဒီလိုအချိန် တွေးမိနေတယ်။ “ပွဲခင်းထဲ သွားကြည့်လည်း ရသားပဲ” လို့ . . ခုတော့ အွန်လိုင်းကိုပဲ အားကိုးရတော့မယ်ကွယ် . . . . .
Saturday, October 24, 2009 8:13:00 PM
၁၀ တန်းပြီးကတည်းက မကြည့်ရတော့တာ ဒီနှစ်နဲ့ဆို ၆ နှစ်လား ၇ နှစ်လားပဲ ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတရ် ချယ်ရီမြေရေ ။
Sunday, October 25, 2009 2:37:00 PM
မပြန်ဖြစ် ကျတဲ. taunggyi သား တွေ ကို ကိုယ်ချင်းစာ
Wednesday, October 28, 2009 12:05:00 AM
thank'salot taunggyicherryland yae...........
taung paw ham kyipyin kha' ta' taungpawthar
twayatwat tot taungsaungtaing pwaye har
a pyawe shwen son pwaye par...........
aung myin par say.................
Wednesday, October 28, 2009 12:42:00 AM
Thursday, October 29, 2009 12:03:00 AM
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ လို့ဆိုသံမကြားရခင်ကတည်းက မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲဝင်လွှတ်ကြမယ့် မီးဆရာတွေ ဆိုတာ ၄လ ၅လ လောက်ကြိုတင်ပြီးတော့ ဝါးတွေစု၊ ရှမ်းက္ကူတွေစု၊ ရေနံချေးတွေစု စသဖြင့်ပေါ့ ပြိုင်ပျွဲမှာ လိုအပ်မယ့် ပစ္စည်းတွေကို ရှာထားကြရတယ်လေ...
Monday, November 02, 2009 9:32:00 PM
Friday, October 09, 2015 6:10:00 PM
Aurora Way ကလေးပန်းချီပြပွဲ ပန်းချီကားများ
2008 - မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲဝင်များ ၏ ပြင်ဆင်နေမှု များ
Aurora Way ကလေးပန်းချီပြပွဲ
2008 ခုနှစ် - တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံ ပြ...
" ကြယ်စုံမဲ့ ချယ်ရီည ''
To celebrate the famous monk burning corpsesaday...
တောင်ကြီး၊ စင်ကာပူ နဲ့ အောက်တိုဘာည
2008 ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲ မှတ်တမ်း video clips
2008 ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ (၁ )